ဂျဟန္နမ်(ငရဲဘုံတွင်) ငရဲကျနေသောအမျိုးသမီး၆ဦး | မျိုးမြန်မာ
Posted by myomyanmar on April 19, 2014
Posted in: အစ္စလမ်ဘာသာ.	Tagged: ဂျဟန္နမ်မီ, ဂျန္နသ် (သုခဘုံ), ငရဲ, Hell.	Leaveacomment
မွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့ မိန်းကလေးတွေတော့ ဂျဟန္နမ်မီ ငရဲကျတော့မယ်။
ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ မုဟမ္မဒ်ကြီးက တစ်ချိန်သော အခါတစ်ခုက မေ့အ်ရာဂ်ျ(ကောင်ကင်ဘုံ)ခရီးစဉ်တစ်ခုကို သွားခဲ့ပါသတဲ့။ အလ္လာဟ်ဖန်ဆင်းထားသော သုခဘုံတွေကို လျှောက်လည်တယ်ပေါ့။
အဲဒီမှာ ဂျဟန္နမ်(ငရဲဘုံတွင်) အမျိုးသမီးတွေကို အဇားဗ်(ပြစ်ဒဏ်) ခံနေရသည်ကို တွေ့ခဲ့ရပြီး လူပြည်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်မှာ ငိုနေခဲ့တယ် တဲ့ဗျာ။
အဲဒီလို ငိုနေတုန်း ဟဇရသ်အလီသခင် ဆိုသူ နဲ့ ဖွာသွေမဟ်သခင်မတို့ က မိုဟမ္မဒ် ကြီးငိုနေတာကို တွေ့ လို့ မေးကြပါရောတဲ့ဗျာ။ ဘာကြောင့် ငိုနေရသလဲပေါ့။ဒီလို ကိုယ်တော်ကြီးကို ၀မ်းနည်းပူဆွေအောင်ဘယ်သူတွေက လုပ်သလဲ။ မေးကြတဲ့အခါ မိုဟမ္မဒ်ကြီးက ပြန်ဖြေသတဲ့။
ငါကိုယ်တော် မေ့အ်ရာဂ်ျ(ကောင်းကင်ဘုံ)ခရီးစဉ်မှာ အမျိုးသမီးများကို ဂျဟန္နမ်(ငရဲဘုံတွင် )မှာ အဇားဗ်(ပြစ်ဒဏ်) ခံနေရသည်ကို တွေ့ခဲ့ရလေသည်။ တဲ့။ ၎င်းတို့ရဲ့ အမျိုးမျိုးသော ဂိုန္နဟ်(အကုသိုလ်များ)ကြောင့် အလွန်ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော (အဇားဗ်)များ ပေးခြင်းခံနေရသည်ကို မြင်ယောင်၍ အလွန်စိုးရိမ်မကင်းဖြစ်ခါ ငိုကြွေးနေရပါတယ် လို့ ဖြေ သတဲ့.။
(မှတ်ချက်=ဒီနေရာမှာ မိုဟမ္မဒ်ကိုတော်ကြီးက မိန်းမတွေကို တကယ်ချစ်ကြောင်း သိသာပါတယ်။)
အဲဒီနောက်မှာ မိုဟမ္မဒ်ကြီးက ထပ်မိန့်တယ်
ပထမဦးဆုံး အမျိုးသမီးက သူမရဲ့ ဆံပင်တွေကို တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲထားသည်။ သူမရဲ့ ဦးနှောက်များက အိုးများ ဆူပွက်သကဲ့သို့ ပူလောင်ဆူပွက်နေသည်ကို ငါကိုယ်တော် တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ထိုအမျိုးသမီးက လောက၌ရှိစဉ်က သူစိမ်းအမျိုးသားများရှေ့တွင် မိမိဦးခေါင်းကို ဖွင့်၍ ဆံပင်များဖော်ခါ ဗေပရ်ဒဟ်(အကာအကွယ်မရှိခြင်း)ဖြင့် နေထိုင်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်လေသည်ဟု ပြောသတဲ့။
ဒါကြောင့် အမျိုးသမီးများဟာ ခေါင်းမှရှိတဲ့ ဆံပင်တွေကို တစ်စိမ်းယောက်ျားလေးတွေရှေ့မှ ဖော်မပြရဘူး ။ နင်ဂျာလိုခေါင်းဆောင်းထားရမယ်။ မဟုတ်ရင် ဒီငရဲမှာခံရမယ်။အပြစ်ကြီးတယ်နော်။
ဒုတိယအမျိုးသမီးကတော့ အလွန်နူညံသေ့ာ နှုတ်လျှာမှ တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲထားသည်ကို တွေ့ခဲ့ရတယ် တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးက အလွန်ကြမ်းတမ်းသော နှုတ်လျှာပိုင်ရှင်ဖြစ်လို့။ အဲဒီ နှုတ်လျှာဖြင့် မိမိ၏ ခင်ပွန်းအပေါ် နိုင်လိုမင်းထပ်ပြု စော်ကားခဲ့လို့။ အဲဒီ နှုတ်လျှာဖြင့် မိမိ၏ ခင်ပွန်းအား စိတ်ဒုက္ခရောက်စေခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်တယ်လို့ မိုဟမ္မဒ်ကြီးက ပြောသတဲ့။
ဒီနေရာမှာ ကျွန်တော် စဉ်းစားမိတာကတော့ အိမ်ထောင်ဦးစီးတစ်ယောက်လိုဖြစ်နေတဲ့ မိုဟမ္မဒ်ရဲ့ မိန်းမကြီး ခါတီဂျာ က သူ နိုင့်ထပ်စီနင်းတစ်ခုခု ပြောခဲ့လို့ဖြစ်မယ်။ ဒါကြောင့် ဒီငရဲက မရှိလိုမဖြစ်ဘူး ။ ခါတီဂျာ က ဒါမှကြောက်ပြီး သူကို ပြန်မပြောရဲတော့မှာလေ။ စဉ်းစားမိတာပါ စိတ်မဆိုးရဘူးနော်။
တတိယ အမျိုးသမီးကတော့ သူမရဲ့ ရင်သားများမှ တွဲလောင်းချိတ်ဆွဲ၍ အဇားဗ်(ပြစ်ဒဏ်)ပေးနေသည်ကို ငါကိုယ်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည်။ တဲ့။ ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးက လောက၌ ရှိစဉ်က သူစိမ်းအမျိုးသားများနှင့် မပြုပိုင်သော ဆက်ယှက်မှုကို ပြုခဲ့သောကြောင့်ဖြစ်တယ်။ သူတို့ပြုခဲ့တဲ့ အပြုမူများက ဧကန်အရှက်အိနြေ္ဒရှိသော အမျိုးသမီးများပင် မဆိုထားဘိ အမျိုးသားများတောင် မတွေးဝံ့သော ပြစ်မှုမျိုးဖြစ်သည်ဟု မိန့်တော်မူလေသည်။
ဒီနေရာမှာတော့ မယားတွေများလွန်းတဲ့ မိုဟမ္မဒ်ကြီးက သူမယားတွေကို စိတ်မချလို့ ကြားကားဆွဲမှာဆိုးလို့ ခြောက်ဖို့ ဖြစ်လိမ့်မယ်။ထင်တာပြောတာနော် မှားနေရင်ထောက်ပြ။
စတုတ္ထ အမျိုးသမီးကတော့ သူမရဲ့ ခြေထောက်များကို ရင်ဘတ်နှင့်ချည်နှောင်ထားပြီး လက်များကို နဖူးတွင် ချည်းနှောင်ခြင်းခံရတဲ့ အဇားဗ်(ပြစ်ဒဏ်)ပေးခံနေရသည်ကို ငါကိုယ်တော်တွေ့မြင်ခဲ့ရသည် တဲ့။ ဘာကြောင့်လည်းဆိုတော့ ထိုအမျိုးသမီးက သာသနာအား မထီမဲ့မြင် လှောင်ပြောင်သရောခဲ့ခြင်းကြောင်း ဖြစ်တယ် လို့ ပြောသတဲ့။
ဒီနေရာမှာတော့ ဒီငရဲ က မာလာလာ ကျမယ့် ငရဲပဲ။ အစ္စလမ်ဘာသာကိုရှုပ်ချပြီးအမျိုးသမီးအခွင့်အရေးကို တောင်းဆိုလို့ ဒီငရဲရောက်ဖို့ သေခြာပြီ။
ပဉ္စမ အမျိုးသမီးကတော့(၀က်တိရိစ္ဆာန်)ရဲ့ မျက်နာဖြစ်ပြီး ခန္ဓာကိုယ်က လားတိရိစ္ဆာန်ရဲ့ အသွင်မျိုး။ သူမရဲ့ကိုတော့ မြွေတွေ ကင်းတွေက ရစ်ပတ်သိုင်းခြုံထားပြီး အဇားဗ်(ပြစ်ဒဏ်)ပေးတာကို ခံနေရတယ် တွေ့ရတယ်။ ဒီအမျိုးသမီးကတော့ လောကမှာရှိတဲ့ အချိန် ကုန်းချောကုန်းတိုက် ပြုသောကြောင့် ဖြစ်သည်လို့ ပြောသတဲ့။
ဒါကတော့ မိုဟမ္မဒ်ရဲ့မယားတွေ တစ်ယောက်နဲ့ ယောက်မနာလိုဖြစ်ပြီး ကုန်းချောကုန်းတိုက်လုပ်ကြလို့ဖြစ်မယ်ထင်တယ်ဗျ
ဆဋ္ဌမ အမျိုးသမီးကတော့ မျက်နှာက ခွေးတိရိစ္ဆာန် လိုဖြစ်နေပြီး သူမရဲ့ ပါးစပ်ပေါက်မှ ဂျဟန္နမ်(ငရဲမီး)ကို ထည့်၍ သူမရဲ့ နောက်ဒွရပေါက်(ဖင်)ကနေ ဂျဟန္နမ်(ငရဲမီး)ကို ပြန်ထွက်စေခြင်းဖြင့် အဇားဗ် ပေးခံနေရဒါကို တွေ့ခဲ့ရသည် တဲ့။ ဘာကြောင့်လည်း ဆိုတော့ အဲဒီအမျိုးသမီးက လောကမှာရှိတဲ့အချိန် မိမိပြုခဲ့တဲ့ ကျေးဇူးတရားအပေါ် မော်ကြွားထောင်လွှားစွာဖြင့် ဂုဏ်ဖော်အမြတ်ထုတ်ခဲ့သောကြောင့် ဖြစ်သည်ဟု ပြောသတဲ့။
ဒီနေရာမှာတော့ မိုဟာမက်ကြီးလိုက်ကြောင်တဲ့ သူဋ္ဌေးသမီးတစ်ချို့က သူ့အပေါ် ကျေးဇူးကြွေးတွေရှိသောကြောင့် မောက်မောက်မာမာ ပြောလို့ဖြစ်မယ်။
ဘာပဲပြောပြော မိုဟမ္မဒ်ကြီးရဲ့ မေ့အ်ရာဂ်ျ(ကောင်ကင်ဘုံ) ခရီးစဉ်မှာ မိန်းမတွေရဲ့ ငရဲကို ပဲ သွားကြည့်ပြီး ယောက်ျားတွေရဲ့ငရဲကို မကြည့်တဲ့ မိုဟမ္မဒ်ကြီး အကြောင်းတစ်ခုခုကြောင့်ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်တယ်။နော်.။ နောက်ပြီး ဗဟုသုတတစ်ခုရသွားတာက မွတ်စလင်တွေရဲ့ ငရဲက ကောင်းကင်ပေါ်မှာရှိတယ်။ ဒါကြောင့် မွတ်စလင်တွေရဲ့ ဖေဖေ မေမေ တွေ ကို ဘယ်ရောက်သွားပြီးလဲလို့ မေးရင် ကောင်းကင်ပေါ်လက်ညိုးထိုရင် ကောင်းကင်ဘုံရောက်နေတယ်လို့ မထင်လိုက်နဲ့ ငရဲရောက်ရင်ရောက်နေမှာ။ ..သေခြာမေးနော်။
နောက်ပြီးမွတ်စလင်မဟုတ်တဲ့အမျိုးသမီးတွေ အပြစ်တွေကတော့ မြင်တဲ့အတိုင်းပဲ အကုန် အဲဒီငရဲကိုရောက်တော့မှာ။ မွတ်စလင်တို့ရဲ့ အပြောအရ ကိုယ်တော့်ရဲ့ ရွှေမျက်ရည် တန်ဖိုးထားဖို့ အလွန်အရေးကြီးတယ်။ ဂျန္နသ် (သုခဘုံ)ကို ရောက်ဖို့ နေထိုင်ကြပေတော့။ ဟဲဟဲ
← ဂုဏ်ယူလိုက်ပါ ဘယ်ဘာသာမှာရှိလဲ ?
“ရွှေသားဗုဒ္ဓဆင်းတုတော် ပြန်လည်တွေ့ရမတော်တဆ” →